Nraranye nke ụbọchị: ọgwụgwọ maka oke agụụ
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 30, 2020 Ọktoba 30, 2020
Kpebie ịlụso ya ọgụ. The kasị nwee ahuhu bụ n'ozuzu kasị sie ike esịtidem cross ibu; ọ bụ okwukwe nke ezi mkpụrụ obi! Na-alụ ọgụ mgbe niile, na-ebili mgbe niile; mgbe ị kwenyere na ọ merie, ọ ka na-egosi ike. Ihe na-aga n'ihu dara nkụda mmụọ: mgbe afọ iri abụọ nke mgba, ịchọta onwe anyị ọzọ na-akpali melancholy na enweghị ntụkwasị obi na anyị: ihe niile na-kweere na-efu !, .. Obi ike, ọgụ ọzọ; ọ bụrụhaala na ị nwere mmeri na oge ikpeazụ nke ndụ, nke ahụ zuru, ka I Iomi na-ekwu.
General ọgwụgwọ. 1 ° Ọ dị mkpa ịmara ya iji mara ka esi alụ ya; nke a na-abịa na iji nlezianya nyochaa akọ na uche, na ajụjụ nke ezigbo enyi ma ọ bụ onye nkwupụta mmadụ. You meela ya? 2 ° Ikwenye na mkpa ọ dị ịlụ ya; ebe a enweghi ụzọ: ma ọ bụ iji merie, ma ọ bụ ịnọgide na-emeri! Ọ bụrụ na anyị bụ ndị ohu ya na ndụ, anyị ga-ata ahụhụ na ya ruo mgbe ebighị ebi ... you chere banyere ya? 3 Celsius ha na enyere aka rue nmeri, ntughari uche, Sakrament na aru aru.
Ọgwụ pụrụ iche. 1 ° Iji mee omume ime na mpụga nke omume megidere nnukwu agụụ: ịdị umeala n'obi maka ndị mpako, ndidi maka iwe, ịdị nwayọ na ọrụ ebere maka ekworo, ịdị ọcha nke ebumnuche maka ihe efu. 2 ° Iji nnukwu uchu gbochie ohere ịda, na-enye anyị ụzọ iji merie. 3 ° Were ule a na-agụ agụụ, ịmata ọganihu anyị. Ma onye na-eji ndị a n'aka nke mmeri? Ka anyị na-eme ha.
OMUME. Ọ na-enyocha ule na oke agụụ.
Nke gara aga Post Gara aga post:Gini bu nkwulu nke Mo Nso, nihi ya bu nmehie nke n’enweghi mgbaghara?
Next Post → Post ozo:Kadinal Bassetti di nma maka covid 19